» AKHRISO: Mid kamid ah Gabdhaha FARMAAJO oo War Lagu Farxo Sheegtay….Badweyntimes.com
AKHRISO: Mid kamid ah Gabdhaha FARMAAJO oo War Lagu Farxo Sheegtay….
Gabar uu dhalay M/weynaha Cusub ee loo doortay Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo lagu magacaabo Intisaar ayaa saxaafadda Mareykanka ay ka soo xigatay inay sheegtay in aabaheed uu doonayo howl weyn uu ka qabto Soomaaliya oo qabyo u ahayd.
Intisaar Farmaajo oo 24 sano jir ah ayaa sheegtay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo muddo badan dib loo dhigay ilaa bishii Novembar uu rajo weyn ka qabay aabaheed inuu ku soo baxo oo uu doonayo inuu dalkiisa u shaqeeyo.
“Wuxuu jecel yahay dalkiisa, waana meeshii uu ku dhashay”ayay tiri Intisaar Maxamed Farnaajo oo ay soo xigtay webka Bufallo News xaruntiisu tahay magaalada ay degan yihiin qoyska Farmaajo.
“Sanado badan oo qalalaase ah, wuxuu dalkiisa ka shaqeeyay xilli ay dadka Soomaaliyed rajadii la luntay”ayay tiri Intisaar Farmaajo oo sheegtay dadku ku farxeen doorashada aabaheed oo ujeedkiisu yahay inuu Soomaaliya ku soo celiyo xaaladii caadiga ahayd.
« Warbixinta Ka HoreysayQ.M oo war kasoo saartay M/weynaha Cusub ee loo doortay Somalia…
Warbixinta Xigto »DAAWO: Warbaahinta caalamka oo aad u hadalhaysa qaabkii loo doortay M/weyne Farmaajo..